Enatyabeka ngako - Henan Coal Research Keming Mechanical Co., Ltd.
imisebenzi Plasterer kaThixo
Ngokwesiqhelo umbhambathiswa sele luthunyelwe kuzo zonke iingxowa Isichumisi udaka aza kuzisebenzisa, kwakunye naluphi na ubonelelo yangaphandle amanzi ukuba indlu alikafiki ixhulumane. Eli qela balutyabeka kufuneka ukuzisa izixhobo zabo nezixhobo kwaye ngamanye amaxesha kubonelela bead yabo.
Izinto ukuba plasterer idla kulindeleke ukuba bafeze.
Le plasterer ngokuqhelekileyo kufuneka adityaniswe ngesiteyipla yokuqala okanye tack Cornerbead kwi elibukhali (lwangaphandle) kwikona zonke ngaphakathi endlwini. Kuthathwa Care ukuqinisekisa oku kwenza udonga jonga ngqo yaye ngakumbi isakhono se esweni ngaphezu kwayo nantoni na.
"Bead" efika iindlela ezininzi; Ukusukela wocingo esifakelweyo ezityiwa ukuya kumabanga ngesinyithi onzima ekufuneka ngoku- ngomhla ngezikhonkwane. Iintlobo zeplastiki khona.
Le bead kufuneka lulinganiselwa kwaye bahlabeka nobukhulu; unakekelo luthathiwe ukugoba okanye elusingeni lokuluka ngayo. Kwiindawo apho ngaphezu kwesinye ikona idibana; iziphelo lo bead kaThixo, banqunyulwe kwi-engile kunye amacebiso-2 okanye ngaphezulu zibekwe zisondelelene kangangoko avumelekile; ochukumisayo kodwa zidlulela. Le bead zifakwa ngokupheleleyo ukutyabeka kwakunye nabanye eludongeni kunye udaka ukwanceda yibambe ngokuqinileyo. Le mveliso ogqityiweyo ushiya kuphela bako strip encinane metal kwi Buze yembombo leyo lithe lagubungela xa ipeyintiweyo udonga. Oku kushiya, kwikona Ekhangele ngqo ecocekileyo.
Enye indlela kubonakala ezindlwini abadala wokusungula lembombo ajikelezayo okanye bullnosed isebenzisa quirked bead abasebenzi ngamaplanga. Le bead abasebenzi, a idowel 1 intshi kunye nama 1/3 wazicheba umva, wahlala phantsi kwikona lwangaphandle samagama kwisiza, nto zibambene nayo iiplagi yeplanga ebekwe kwi beentanda izitena / ibhloko, okanye kwisakhelo iinkuni. Ukutyabeka run ukuya bead abasebenzi koko ukunciphisa ngokwasekuhlaleni le bead okanye "quirked" ukuphepha kumngcipheko iintsiba obuthathaka apho udaka sihlangene bead.
Bokwakha gula i 'V' amancinci channel ezimile kusetyenziswa unombombiya kwaye ukunika isiqabu udini khaxa ajikelezayo. Ukudala ikona kokutyatyekwa, eseka ingubo (Browning) kokutyatyekwa kwayo phezulu ukuya bead abasebenzi, ngoko ke gula isikwe ingubo esemva enkulu kancinane ubukhulu ogqityiweyo. Xa lisetyenziswa ingubo ukuskima phezulu, kwakhona bead leyo skimmed ngokupheleleyo yaye emva koko, esebenzisa kumngcipheko ngqo, i-gula Kumana bahlabeka kubunzulu igqityiwe, ngokuqhelekileyo kwi engile 45 degree omalunga kungena bead. Le gula iya fihla nditshaye encinane ekugqibeleni eziza kuba phakathi bead udaka abasebenzi.
Le plasterer kufuneka agcwalise emele 5-neelitha umganyana ngamanzi. Ukusuka kule emele ulenga ngenkcenkce okanye trowels kunye neendawo kuwo izixhobo ezahlukeneyo.
Ngokuqhelekileyo plasterer na nesimbo enye "ngokubekwa" (inkqubo yokufaka udaka phezu kodonga).
Abanye ke ugcine i ngenkcenkce omdala othe begoba kuwonkewonke kuyo (banana curve) ukuba isetyenziselwe iinjongo "texturing"; xa ebizwa ngokuba yi umninindlu. A ngenkcenkce wama--on idla ngokuba tyaba kakhulu kulo kwaye zidle ebangelwe amanzi usifake eludongeni, kwanyanzeleka ukuba linyothule waza ngaloo ndlela ke kufuneka kwakhona kule ndawo.
Ekugqibeleni, uthi abe brand nesimbo entsha "kodwa baphuke-in 'aya kusetyenziselwa" esila "; oku xa isamente phantse lukhuni kwaye smoothing ngaphandle kokuphazamiseka okanye ukugcwalisa naziphi idiphu ezincinane (ikati lijongene) ukwenza udonga jonga ngathi yilinen efanayo ukutyabeka emhlophe ecwebezelayo.
Uninzi plasterers kukhethwa zazo ubungakanani ngenkcenkce abayisebenzisayo. abanye abawasebenzisayo trowels ezinkulu njengokuba 20 intshi elide kodwa norm kubonakala ngathi 16 "× 5". Ukususela amava yam brand ekhethwayo i Marshalltown insimbi. Zinelungelo brassy ayenechaphothi kubo, ngesiphatho irabha kunye akayi iingxabano phakathi okanye umhlwa ukuba ekhohlo ngempazamo kwi ebusuku amanzi lo gama abanye bakhetha a ebe nesimbo rhoqo efuna ukulungiswa kakhulu kodwa ke ithatha ixesha elide kwaye inaba angakunika i " zikutye "enceda xa" ukugqibezela "(i yokupasa yokugqibela xa udaka seliya).
Wangena emele nayo iya ibhrashi enkulu esetyenziselwa afefe amanzi phezu kodonga kunye ukucoca izixhobo zakhe, ibhrashi yepeyinti bazenza iimbombo smoothing, kwaye intaka kwikona ngenxa yokuzimanya iikona (nangona abaninzi share enye intaka elungileyo ukugcina igumbi evumelanayo).
Ezi emele isixhobo zigcinwa kuqala kufutshane itafile ukuxubana uze njengokuba udaka iqalisa asetelwe esondela eludongeni ukuba isetyenzwa kuyo. Ixesha uba into enkulu apha njengoko kanye udaka iqalisa lukhuni (iseti) iya kukwenza oko ngokufanelekileyo ngokukhawuleza kwaye plasterer uba ilayini encinane Imposiso ukufumana udonga kakuhle.
Phezu kwetafile ukuxuba le plasterer ngokuqhelekileyo ubeka "Intambanane" kwakhe kuya kuba ziluncedo xa kufuneka ubambe it ukugcina ukungcola kude kuyo. Nayiphi butyobo kwi udaka ube inkathazo enkulu.
Iincopho udaka okanye ezantsi?
Plasterers Izakwahlula ngokuqhelekileyo egumbini, (ingakumbi udonga enkulu okanye high-ceilinged) ukuya phezulu nasezantsi. Lowo ukusebenzayo phezu uya kwenza ukusuka kolunye udini yophahla ukuze malunga isisu ubude ukusebenza off-crate ubisi ukuba isilingi-8-unyawo (2.4 m), okanye umsebenzi ngaphandle yasekelwa ukuba amagumbi 12 unyawo--phezulu. Kuba Uphahla Cathedral okanye iindonga eziphakamileyo kakhulu, yaso umiselwe kwaye omnye usebenza topside, abanye ngakumbi ngezantsi.
Coca phambi kokuba kugqiba umsebenzi
owenziwe Ngokuqhelekileyo kunye womlimi. Akukho globs udaka yashiywa imigangatho, amadonga okanye ezinemiphetho kwikona bead. (Baya kubonisa phezulu ukuba beqabe kwaye iphazamise ukutyibilika, inqumle). Susa okanye ngobunono ziphakishe yonke inkunkuma.
Onke amagumbi kunye iindonga ahlolwe ukuze Siqubisana nangabanye okanye imikrwelo enokuba yabangela kwabanye kokungqubana iindonga. Kananjalo mazihlolwe ukuqinisekisa akukho amaqhuma abaseleyo emadongeni ukusuka ityatyekwe ndandihlamba okanye emanzini. Onke amagumbi iyahlolwa ukuqinisekisa zonke udaka kukho umntu oligilileyo ngaphandle iindawo ngoko ke kwezombane ungafaka iziseko kwaye uqinisekise ukuba akukho zixhobo ze eziseleyo ngasemva. Oku kushiya alungele zabazobi kunye abagqibe ukuza aze enze umsebenzi wabo iindonga.
ubuchule ukufaka Interior
Umnini ekhaya kunye boss le plasterer zazidla uya isigqibo kwangaphambili engafunekiyo baya kusebenzisa endlwini. Iindonga Ngokuqhelekileyo kukho amaceba anencasa ngamanye amaxesha. Ngokwesiqhelo njengomninindlu ukuphuma kufuneka iisilingi basebenzisa i "texture" ubuchule njengoko kulula kakhulu, ngokukhawuleza, yaye ngaloo ndlela zitshiphu ngaphezu silingi egudileyo.
Amaxabiso plasterer kuchaphulo olu ngokusekelwe iindlela eziza kusetyenziswa iinyawo ibhodi ukuba kuhlawulwa kwi kontraki okanye kowu phambi kokuqala umsebenzi. Iinyawo yeBhodi afunyenwe ezinye okanye elilinganiswe ikontraka yintloko ngokubala wallboards eza kwindawo imboni standard of 8 '12' elide. Emva koko athi xa iindleko eyongezelelweyo soffits nakwiisilingi Cathedral.
Isilingi yesibini okanye yokuqala
Ngokuqhelekileyo ukuba isilingi ukuze zibe mpuluswa oko kwenziwe kuqala, phambi kokuba iindonga. Ukuba ukuba textured, oko kwenziwa emva iindonga.
Isizathu soku kukuba njalo xa silingi isetyenzwa kwi ukutyabeka uya kuwa aze atshize kwi iindonga. Kodwa akukho ingxubevange texture ngaba kufuneka ukuba egudise xa iqala ukubeka:
ngaloo a nekudodobalisa ezifana "Cream lwethathari" okanye iswekile zingasetyenziswa baqhubeke nini, kwaye ngokulula bawuphose umhlaba abawuphalileyo iindonga.
yaye ekubeni ixesha kungekhona ubezivingcile libaluleke kwi iisilingi textured umxube enkulu, okanye back-to-umva nemixube lunakho ukwenziwa yaye zonke iisilingi zagutyungelwa ngexesha elifanayo.
esinye isizathu kukuba ntaka idla run ecaleni kwikona ephezulu emva kokwenza silingi agudileyo, ke kulula ukugcina le elunxwemeni ngokwenza udonga lokugqibela. Kodwa nophahla textured ngokuqhelekileyo akuyomfuneko ukuba birded, enziwe kuphela ye ibhrashi yepeyinti emanzi kakhulu. Kule meko kwenziwa udonga yokuqala kunye ikona kwasekwa nangentaka.
Into yokuqala i plasterer lidla ukuba ukwenze nje ukuya phezu onke beentanda umnatha-duct yeendonga aza ukufihla; ngendlela swatch obhityileyo kakhulu. Le wallboard itsalela ukufuma kule ngumcu ke xa plasterer uvuthuza kuyo kwakhona xa ukwenza ezinye kodonga akuyi ushiyela umthungo lungqamane ukuba ifuna kwakhono ngakumbi.
Yena ke ugcwalisa kummandla kufuphi kwisilingi ukuze akayi kufuneka ndisolule ukufikelela kuyo ngexesha lonke udonga; Yaye yakha kwikona bird yakhe. Oku igcina ezifunekayo ixesha njengoko le nkqubo uhlanga nxamnye basabela imichiza.
Ukusuka etafileni umxube le plasterer ephuma ezinye "udaka" kwi embindini nesihuluhulu bakhe kunye nesimbo sakhe. Ukubamba nentambanane yakhe off-ngesandla kunye nesimbo sakhe eziziiprayimari plasterer bakhe ephuma incwadi esongwayo equmbile na ukutyabeka kwi nesimbo sakhe. oku kuthatha isuntswana practice kwinkosi, ingakumbi ukuhlanganiswa soupy.
Emva koko ubambe ngenkcenkce eyayingqalene nodonga kwakunye engile kancinane izihlahla uzama sisusa ngokufanayo udaka phezu kodonga. Ngendlela efanayo ukuya squeegee. Iqala malunga intshi ngaphezu emgangathweni kwaye isebenza ngendlela yakhe phezulu ukuya eluphahleni. Care kuthathwa zifane kangangoko njengoko kunceda kwisigaba ophela kuyo.
Kuxhomekeka ngexesha lokutshona udaka. kwakuba nje ukufuma buqala udaka ukuba sibhalwe yibhodi indlela yokungena yesibini senziwa. oku kuthiwa sinkqonkqoza phantsi. ukuba sifana isicelo ngepeyinti nge roller kwintshukumo esihlahleni nenjongo. njengokugudisa naziphi imigca uze ufakele naziphi imigodi ezinkulu eziya kwenza umsebenzi engaphezulu xa udaka uqala ukubeka ngokwenene. uxinzelelo encinane kakhulu lisetyenziswa kwaye ngenkcenkce igcinwa tyaba ukuya eludongeni.
Maxa wambi accelerant ziya kongezelelwa umxube ukungxama ixesha ukulibaziseka ukusuka ekuqaleni kwisigaba ukuxuba ukuba xa udaka uqala ukubeka. Oku ngesiqhelo kwenziwa ngeentsuku ezibandayo xa sicwangciso kulibaziseka okanye imisebenzi ezincinane ukunciphisa andilalele.
Xa udaka phezu kodonga aze aqalise ukubeka (oku kumiselwa yitafile litshona kuqala), lo plasterer gingerly ofefa ngamanzi phezu kodonga; oku kuyanceda okomzuzwana imeko isimo sentlalo kunye nokudala iziliphu. Emva koko usebenzisa nesimbo sakhe yaye ngokufuthi ibhrashi waziva desensitised kuqhutyelwa ngesandla esahlukileyo nejongelwe lada laya kufikelela eludongeni ngaphambi ngenkcenkce ukusebenza lo isiliphu ibe naziphi izikhewu ezincinane (eyaziwa ngokuba yi "catfaces") kwi udaka kwakunye uwugudise rough walala-on kwaye camabalalisa naziphi amaqamza olwakheka ngexesha sentlalo.
Eli lixesha kakhulu kuba xa udonga ufumana kunzima kakhulu kuba phantse akunakwenzeka ukuba bazalise naziphi na izithuba njengoko isiliphu iya kubeka elide eludongeni kwaye endaweni nje owomileyo, uwe. Oku kukhokelela imfuneko okubizwa ngokuba "besila" njengoko kufuneka uye phezu kodonga nzima kwakhona kwaye kwakhona izama ukugudisa ngaphandle eludongeni lukhuni yaye naziphi catfaces ezinkulu kufuneka igcwaliswe nge putty nentaba, ngokudibeneyo ezimbaxa, okanye kuyasetyenzwa kwakhona yi alpha ngendlela entsha, umaleko obhityileyo.
Udonga ogqityiweyo iza kukhangela ezenziwe ngokufanayo tyaba kwaye kwamagingxi ukuchukumisa. Emva kweentsuku nje ezimbalwa iya kuba emhlophe chalky kwaye ke ziipeyintiwe phezu.
Ukususela kwixesha ezi plastiki enokulahlwa Umphanda xa udonga elibekwe ngokupheleleyo kuthiwa umxube. Angafaniyo kwi ubuchule kunye nokuba accelerant okanye nekudodobalisa ifakiweyo, ingxubevange ikwazi ithatha malunga neeyure ezimbini.
Le mizuzu yokugcina zezona bemfuna ukuba ogudileyo okanye ukuba umxube icwangcisa ikhawuleze kunokuba bekucingwa. Ukuba oku kuyenzeka oko wathi umxube iye "ebotshwa" yaye ngokuqhelekileyo ngenxa usebenzisa imveliso endala okanye iintlobo ezahlukeneyo zemozulu (ukufuma okanye ashushu iintsuku kunokubangela udaka ukuseta ngokukhawuleza). Ngokuqhelekileyo nje ezintathu okanye ezine nemixube zenziwa ngemini, ukufaka i siyimfe yaye hayi phantsi Izibane nemvelo kwiinyanga kunye ngongcwalazi ekuqaleni.
ukufaka kwenziwa kunyaka ngeenxa kodwa iingxaki ezizodwa zisenokuvela ngexesha lonyaka ngexesha lonyaka. Ehlotyeni, ubushushu kubangela ukuba udaka ukusetha ngokukhawuleza. Udaka nalo ubushushu bayo kunye nezindlu abe kakhulu hellish. Ngokuqhelekileyo abasebenzi udaka liya kuzama ukuya kufika endlwini kakuhle kwangonyezi.
Kwiinyanga zasebusika, mihla kubangela imfuneko yokuba ukulayita. Kwigophe ezithile kwezi zibane ungenza nkqu udonga jonga zimtyibilizi ngathi phezu kwenyanga. Enye byi kwiinyanga zasebusika ukuba ufuna ukusebenzisa izifudumezi propane jet (nto leyo angcolise ubungangamsha udaka bulubhelu kodwa musa ngenye buhlungu oko), hayi nje ukugcina plasterers eshushu kodwa kwakhona ukuthintela amanzi nomxube evela ngqele ukwenza ice kwakheka phambi kokuba udaka ixesha ukuseta. Kwakhona ukuba ithumbu yamanzi kakuhle amanzi phambi kokuba usishiye freeze phezu ebusuku kwaye wayeka ngokupheleleyo kusasa.
Texturing idla igcinelwe kumagunjana, iisilingi kunye neendonga igaraji. [Ucaphulo efunekayo]
Ngokuqhelekileyo yiarhente ezalanayo wongezwa mxube. oku kuqheleke Cream lwethathari (okanye "Dope" kwi kwiintetho le plasterer ngayo) kwaye kufuneka zithathwe kunye inani elongeziweyo. Eninzi kakhulu kwaye umxube unakho ze konke konke. Nangona kunjalo imali esetyenziswa kudla kuqikelelwa; ngendlela enye yongeza liyahlasela wetyuwa iresiphi. usongeza scoop encinci retarder, kuxhomekeke kubungakanani umxube. Nekudodobalisa idityaniswa ukuze kwenziwe nemixube ezinkulu ukuba, ekubeni ubuchule texture ayifuni umntu alinde de iqala ukuba babeke phambi ukusebenza kuyo.
Zazifile-on kwisigaba iyafana ligudile, kodwa idityaniswa kunye ingubo ziyatyeba. Xa ingubo phezu ngokufanayo lo plasterer ngoko ebuyela neentaka iikona zayo. Ukuhlala kude kwikona ke ufumana nesimbo ibhanana igophe emnandi kuyo kwaye siqala ukusebenza phezu kodonga ngokomzekeliso ezisibhozo okanye ipateni Ess, qinisekisa ukuba uwele zonke iinkalo ubuncinane kanye. Wongezelela athi a udaka chatha kancinane ngenkcenkce yakhe xa kuyimfuneko. Le nomphumela kunokudala yepeyinti-ezifana swaths phezu kwawo wonke yophahla okanye udonga. Yena ke ukuhamba nje kude waqeshisa ngaso beka ngenkathalo luthathiwe kakhulu bashiye globs kwaye uqinisekise iikona khangela kakuhle kunye nemicwe.
Ukuba udonga ukuba zibe mpuluswa kunye nophahla textured, kudla ngokwenziwa kuqala udonga, ngoko kwisilingi emva Walimisa eludongeni. Kunokuba rebirding yophahla (leyo ukuba kwenziwe xa wabeka udonga), nesimbo ecocekileyo ibanjwa udonga, ikona iqhutywa ecaleni isilingi ukuba 'kunqunyulwa kuyo "kwaye acoce udonga ngexesha elifanayo. Le umgca koko walungisa kunye ibrashi ukwenza utshintsho olungenamagingxi-gingxi.
The isiponji (Nngokobuchwepheshe ngokuba esijingayo), unohlobo isangqa kunye umphezulu alatyuzayo. kokuba fixed ukuba baxhaswa kunye handhold engundoqo kwaye buthi ubukhulu nesimbo eqhelekileyo. Sponge yindlela lobeko ukuguda noburhabaxa kwakunye ezisetyenziswa ngokuqhelekileyo phezu iisilingi kwesinye emagumbini. Ngokuqhelekileyo xa usebenzisa isiponji; Isanti idityaniswe mxube kunye ndlela kuthiwa esantini-ilula.
Kufuneka ilunyukelwe kakhulu ukuba ukuma ngqo phantsi ngenkcenkce yakho xa ukwenza oku njengoko kakhulu, zingambi kakhulu, kwaye kuyingozi ukufumana nokhozo esanti iliso lakho; nto leyo yandiswa eku- zekalika ngokunjalo. Oku kudityaniswa ngokulula zingayikrwela iliso.
Le Umxube wama--on yaye kuyafana kunye texturing rhoqo. Kodwa emva kokuba isinxibo idyasi egudileyo ibekwa phezu Isilingi kungqameko, banqunyulwe ku; isiponji okhethekileyo ebuxande kunye umqheba zisebenza kulo eluphahleni kwiziphakamiso sifana kunye setyhula. Oku kuthatha ezinye izakhono kunye umkhuba ukwenza kakuhle.
Jonga ngokubanzi ipateni uhlobo fishscale phezu yophahla, udonga yokugcina, njl Nangona retarder isetyenziswa ngokuqhelekileyo; makwenziwe ngenyameko ukucoca le isiponji ngocoselelo xa ugqibile njengoko nayiphi na ukutyabeka ukuba lukhuni ngaphakathi kuya kuba nzima ukususa.
yasekelwa yokusebenza afuneka ngamanye ukutyabeka iisilingi ezininzi yaye ngokuqhelekileyo kunzima ukubeka-on baze basebenze ngaphezu iindonga. Kuba Uphahla elifutshane elinye kwakhona ukusebenza kwiibhokisi ubisi. Ubunzima yokusebenza zibheke ezantsi kudla ngokuphumela iziqhushumbisi udaka afafaze phezu imigangatho, amadonga kunye nabantu ngezantsi.
Le nto iisilingi agudileyo, ezisebenzisa akukho nekudodobalisa kwaye maxa wambi nkqu accelerant, zenziwa phambi iindonga. Ukutyabeka kade kungaba lula bawuphose umhlaba abawuphalileyo a udaka eludongeni kakuhle xa kumanzi. Nayiphi splatters ukusuka silingi ogudileyo kungaba lula bawuphose umhlaba abawuphalileyo blueboard ebalelelwe lilanga kodwa ukusuka eludongeni esele zisindwe. Kufuneka ilunyukelwe kakhulu xa emi phantsi ngenkcenkce wakho okanye omnye plasterer.
Ubunzima jikelele ukusebenza silingi ogudileyo ithengiseka iindleko eziphezulu. Le ndlela kuyafana nje udonga ligudile, kodwa kwi-engile kunzima ukuba plasterer.